Ukugcinwa kokukhusela kwamanqaku atyulweyo ngexesha lokukhulelwa
Striae, okanye njengoko zibizwa ngokuqhelekileyo, amanqaku atyhidiweyo amacwecwe kwiindawo eziphakathi kwesikhumba, ezibonakala zikhanya ngesikhumba esincinci. Ukuphepha ezi zimpawu ezingathandekiyo akunakwenzeka, ngaphandle kokuba, ngokuqinisekileyo, ungumphathisi-mboleko we-heredity. Kuphawulwe ukuba abafazi, oomama kunye nogogo abaye banyamezela umntwana ngaphandle kwamanqaku amaninzi, banokufumana ubuncinci ngokubonakala kwabo.
Izizathu zokuthi umfazi uqala ukuphazamiseka ngumbuzo wendlela yokuthintela amanqaku okulula xa ukhulelwe:
isethi esheshayo yezinto eziqhelekileyo, apho iintambo ze-intanethi ezikwindawo zangaphakathi zesikhumba zikhawuleza;
utshintsho lwe-hormones kumzimba;
ukwandisa ububele besikhumba nomzimba wonke.
Ungakuphepha njani amanqaku atyhola ngexesha lokukhulelwa?
Phakathi koomama abanomso, kukho iindlela ezininzi zokuthintela amanqaku atyulweyo ngexesha lokukhulelwa, okwenziwe ngabantu kunye nemvelaphi yezokwelapha. Zonke azikwazi ukuqinisekisa ukukhuselwa okupheleleyo kokuvela kwe-striae, kodwa ukunciphisa ubunzima bobubonakaliso babo bunako. Ngoko:
Enye indlela yokuphepha amanqaku atyaliweyo ngexesha lokukhulelwa li-sock ye-bandage ekhethiweyo kunye ne-bra exhasayo. I-Linen kufuneka ifaniswe ngokusesikweni kunye nomhla wokugqibela, ungayifaki, kodwa usixhase isisu nesifuba.
Indlela efanelekileyo yokuthintela amanqaku elula ngexesha lokukhulelwa kukutholwa komlinganiselo wokuwahlula kunye nokuzilalisa okupholileyo, ukuphunyezwa kwe-massage yeesetyhula ngamanzi e-elastic water. Ungayisebenzisi kakubi inkqubo echazwe, ukuze ungafumani i-hypothermia.
Ukuze ufezekise imiphumo kunye ne-elastic effect, unokwenza ukukhangela kwesikhumba sesisu kunye nesifuba. Ukwenza oku, uzakufuna iiglavu ze-massage kunye nezikhetho ezikhethekileyo zokucoca.
Indlela efanelekileyo yokuthintela amanqaku atyulweyo ngexesha lokukhulelwa kukusetyenziswa rhoqo kwama-creams kunye ne-elastane, enokukwazi ukwandisa ukunyaniseka kwendawo ephakathi kwesikhumba kwaye ibe ngumqobo wokukhupha.
Musa ukulinda umzuzu xa kukho amanqaku atyulweyo ngexesha lokukhulelwa, kufuneka uqalise ngokukhawuleza ukusikitywa kwamanzi ekhanda usebenzisa ioli yomnquma okanye ioli ye-almond.
Ungasusa njani amanqaku alula emva kokukhulelwa?
Ukuba usenakukwazi ukuphephela i-striae, zama ukuphelelwa yithemba. Emva kwemvume evela kumthwalo kuwe kuya kuba nokusetyenzwa kwezinto ezahlukileyo ukulungisa ukubonakala kwesisu. Ngoko, umzekelo, ukusetyenziswa kwe-mesotherapy yindlela enhle kakhulu yokususa amanqaku afana emva kokukhulelwa . Into ephambili ukujika kwi-salon yobuhle ngexesha, elimele lenzeke emva konyaka emva kokubeletha.
Ukuvuthwa kokuqala kwiplacenta
Njani ukunqoba ukwesaba ukubeleka?
Ukucoca emva kokukhulelwa kwesisu
Iiveki ezingama-39 zokukhulelwa - isisu esiswini
I-fetus kwiiveki ezili-18
Kutheni ungeke ukwazi ukukrazula?
Intambo ye-umbilical ijikeleze entanyeni kabini
Ukukhulelwa kweeyure ezingama-39 - 40
Ukuvuthwa ngexesha lokukhulelwa - zonke izizathu ezikhoyo kunye neendlela ezikhuselekileyo zonyango
I-Adjicept - imiyalelo yokusetyenziswa xa ukhulelwa
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngexesha lokukhulelwa ngaphandle kokulimaza umntwana?
Iifom Podms - zokupheka
Inja ilahlekelwe yintlungu - izizathu kunye nezibonakaliso zezifo
Ama-eggplants with tomatoes ebusika - iingcamango ezingcono zokulondoloza ikhaya elihle
Baursaki kwi yogurt - iresiphi
Ndiyakwenza idayi zam idayi ngeezinwele?
Iponcho evela ePavlov Posad shawls
Impembelelo yomculo weklasi kumntu
Iimidlalo zamathoyizi zabantwana abane-4-5 ubudala
Iipilisi ezisuka kwingcinezelo - nini naziphi na iziyobisi onokuzithatha?
Iliso elinye: 40 yeengenelo ezinzulu ezivela kwiidayari zamantombazana!
Imiqondiso yomhlaba ye-zodiac
Shish kebab ehhavini kwimikhono
Yintoni enxiba ngayo ibhogi eluhlaza okwesibhakabhaka?
Imyuziyam yaseMaritime (i-Stockholm)
Iikhredithi ekwindla-ebusika 2014-2015
Inja yezilwanyana zokutya